I-Deck patong Patong Beach Usaziwayo we-inthanethi we-Infinity pool king bed efulethini elinekhishi Uhambo lwamahhala olukhethwayo Usokhaya wase-China
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Miss
Bhukha igumbi bese uthumela uhambo lokuzungeza isiqhingi (olumisiwe ngesikhathi sobhadane)
Imikhiqizo yokulala neyokugezela emisha sha, izinto zangasese zohlobo, umgcini wasendlini waseShayina, ukuze akunikeze ulwazi lokuhamba olunethezeke kakhulu.
1.8*2.3m umbhede wendlovukazi
Ukubuka okusha kwentaba okumangalisayo
Impahla Egcwele Impahla Ephelele, Isiqandisi Se-TV Air Conditioner Washer Dryer
Isethi egcwele yezinto zasekhishini, umpheki wokungeniswa, ihhavini ye-microwave, i-hood hood, izinto zokusika, izitsha zetafula, izinkomishi namapuleti
Izinsiza zomphakathi zamahhala, indawo yokubhukuda, indawo yokuzivocavoca, indawo yokupaka izimoto, i-sauna
Imizuzu emihlanu ukuya ePatong Beach
Imizuzu eyishumi ukuya ePub Street
I-Rooftop infinity sea view pool yokubhukuda
Kukhona isitolo esidayisa ukudla emnyango
Ngizokusiza ngokufudumele kuzo zonke izinkinga ohlangabezana nazo phakathi nohambo lwakho, njengokuthatha isikhumulo sezindiza, ukubhuka uhambo losuku, amasu okudlala ayiqiniso, njll.
Isevisi yokuhlanza ayinikeziwe nsuku zonke ngesikhathi sokuhlala kwakho efulethini, uma udinga ukuhlanza okwengeziwe, sicela wenze i-aphoyintimenti okungenani usuku olulodwa kusengaphambili (mahhala). Kumahhala kumakhasimende esikhathi eside kanye ngeviki.
Ukubhema akuvunyelwe ekamelweni. I-Durian ayivunyelwe. Ukubhema akuvunyelwe. Kunendawo yokubhema endaweni yokupaka. Abephula umthetho bazobhekana nezinhlawulo eziphezulu.
Ifulethi lisendaweni yegolide ePatong Beach. Kuthatha imizuzu emi-5 ukuya e-Patong Beach, nemizuzu eyi-15 ukuya e-Jiangxi Leng Shopping Center kanye ne-Patong Bar Street. Izinto zokuhamba zilungile, ukuyothenga kulula, umphakathi uthulile futhi unethezekile, futhi umnikazi wendawo okhuluma isiShayina uyakwazi ukuxhumana ngaphandle kwezithiyo.Inketho yakho yokuqala yeholide nokuhamba.
Izindawo zokuhlala ezizungezile ziphelele, izindawo zokudlela nezitolo ezinkulu ziningi, futhi ukuphila kulula. Ngesikhathi esifanayo, igwema ngokuhlakanipha umsindo, ukuze ukwazi ukujabulela indawo yangasese edolobheni elimatasa, futhi uphumule kahle ngemva kokubuya emdlalweni.
Igumbi lifakwe usofa onethezekile, itafula lokudlela elanele abantu abangu-2-3, kanye nekhishi elihlome ngokuphelele ukuze upheke ukudla. I-balcony yangasese, i-wifi yesivinini esikhulu, i-LCD TV, isiqandisi kanye nompheki werayisi nakho kuyatholakala.
Ifulethi lisendaweni yokuhlala ephezulu yase-Patong. Indawo yokwamukela izivakashi ingeyesimanjemanje, inemishini yokugada amahora angama-24 kanye nokuphepha. Ihlinzeka ngezindawo zokupaka zamahhala, indawo yokuzivocavoca kanye nechibi le-infinity elisezingeni eliphezulu. Ungakwazi ukuzipholisa echibini le-infinity esophahleni, noma ushise ilanga kuma-lounger futhi ubukele ukushona kwelanga okuhle. Ngikholwa ukuthi ungachitha iholide eliphumuzayo nelimnandi lapha!
Indawo emaphakathi ye-Patong, ethule phakathi nesiphithiphithi, izungezwe izitolo, izindawo zokudlela nezitolo zokubhucunga. Kuthatha imizuzu eyishumi ukuya ku-Jiangxi Leng Bar Street, kanti i-Patong Beach iqhele ngamamitha angu-550. Izinto zokuhamba kulula kakhulu. Ukulandwa kwamahhala kwendlu ngendlu nokulethwa kohambo lwansuku zonke, izindawo ezikhangayo, njll.
热爱阳光 沙滩 冲浪 的元气女孩！
8:00-23:00 amahora okusebenza, alungele ukukusiza.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$303.